Le journal du 23 mars 2022 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Des enfants en train de lire le magasine Karné.
13 amin’ny 23 lozam-pifamoivoizana nahafatesan’olona teto Antananarivo no nahakasika moto hatramin’ny desambra.
Tetikasa OBSMADA: tafiditra anatin’ireo disadisa momba ny fananantany ny tanora.
Ny autisme eto Madagasikara : Tsy ampy ny fandraisana an-tanana azy ireo.
Fomba hiresahana amin’ny ankizy ny hevidraikitra.
Studio Sifaka · 2022 - 03 - 23 NY VAOVAO